Koorsooyinkayaga internetka | Tababarka Garashada
Koorsooyinkeena khadka tooska ah
Hoos waxaad kaheleysaa koorsooyinka ka dhaca khadka tooska ah (Zoom platform).
Daaweynta aphasia (18-19 Sebtember 2021)
Goorma: Sabti 18 iyo Axad 18 Sebtember 2021 (9: 00-13: 00)
Maxaa dhacaya haddii aanan ka qaybqaadan karin? Adoo iibsanaya koorsada waxaad isla markiiba heli doontaa bilaash iyo nolol intarnetka koorsada asynchronous taas oo ka kooban, loo qaybiyay mowduuc, isla waxyaabaha ku jira koorsada isku mid ah.
Qiimaha: Hoose ilaa sare 70 €
Meelaha la heli karo: 8 ka mid ah 30
Barnaamijka: La tasho barnaamijka
Foomka diiwaangelinta: Saxiix halkan
Hawlaha fulinta ee DSAs (25-26 Sebtember, 2-3 Oktoobar 2021)
Goorma: Sabtida 25 Sebtember (9-13: 00), Axad 26ka Sebtember (8: 30-13: 30), Sabti 2 Oktoobar (8: 30-13: 30), Axad 3 Oktoobar (9: 30-12: 30)
Maxaa dhacaya haddii aanan ka qaybqaadan karin? Duubitaannadu waxay sii ahaan doonaan kuwo diyaar ah 30 maalmood kaddib marka koorsadu dhammaato
Qiimaha: Hoose ilaa sare 145 €
Meelaha la heli karo: 18 ka mid ah 30